Phupha ngeNest Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
Ngokusisiseko, iindlwane zihlala zingumqondiso wokhuseleko nokhuseleko. Oku kuyasebenza nakwinkcazo yamaphupha. Indlwane inokuvela apha kwiimeko ezahlukeneyo kakhulu. Kuyenzeka, umzekelo, ukuba ephupheni sibona indlwane yentaka okanye kukho ezinye izilwanyana kwindlwana. Ngokunokwenzeka indlwane nayo ishiywe ephupheni okanye amaqanda ayiqulathiweyo atshatyalaliswe. Amaxesha ngamaxesha uphupha ukuba ukwindlwane, uziva ukhululekile ngayo okanye ungathanda ukuyishiya.
Xa utolika amaphupha anje, iimvakalelo ezihlala zivakala zinokubaluleka ngokufanayo kubandakanya umxholo wekhonkrithi wephupha.
Ngendlela, ukuba uthetha "indlwane" ngengqondo yelali encinci, funda inqaku lethu "kwilali" ngentsingiselo yophawu lwephupha.
Ezinye iimeko zokuphupha, apho indlwane yezilwanyana idlala indima ephambili, zenzeka rhoqo kunye nabantu abalalayo. Okokuqala, singathanda ukukuchazela ukuba athini la maphupha endlwane kwaye athetha ntoni:
1 Uphawu lwephupha «Indlwane» - awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
1.1 Yakha indlwane kwilizwe lamaphupha
1.2 Ukubona amaqanda kwindlwane, ukutshabalalisa iklatshi ephupheni.
1.3 Amava ezinambuzane ezinambuzane ephupheni.
1.3.1 Ingqalelo! I-Hornet okanye iindlwane ze-wasp zidlala indima ebuthongweni.
1.3.2 Hum, hum, hum: Ndiphupha inyosi
1.3.3 Phupha malunga nokuphilisa okanye ukutshabalalisa izidleke
1.3.4 Ubusuku kubantu abaninzi: indlwane yesigcawu apho kuzalwa khona izigcawu zosana!
1.4 Xa iindlwane zeentaka zivela njengophawu lwephupha
1.4.1 Ukuphupha iindlwane zeentaka kunye okanye ngaphandle kwamaqanda
1.4.2 Esona silwanyana sinekratshi! Qaphela ukhozi kwindlwane ephupheni.
1.5 Inyoka kunye neendlwane kwihlabathi lamaphupha.
1.5.1 Iphupha lendlwane eneenyoka-indlela eligquba ngayo!
1.5.2 Inyoka eluhlaza esidlekeni: lithetha ntoni iphupha?
2 Uphawu lwephupha «indlwane» - ukutolikwa ngokubanzi
3 Uphawu lwephupha «indlwane» - ukutolikwa kwengqondo
4 Uphawu lwephupha «indlwane» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «Indlwane» - awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
Yakha indlwane kwilizwe lamaphupha
Ukuzakhela indlwane kuthetha ukwenza into ekhuselayo, indawo yokuzimela wena nabo basondeleyo kuwe. Kwangelo xesha, indlwane ikwayindawo yokuzalela, indawo yokuzalela yento entsha. Abo baphupha ngokwakha indlwane bafuna ukusebenzisa imibono yabo kwaye benze iminqweno yabo izaliseke. Amaphupha okwakha indlwane atolikwa njengophawu oluqinisekileyo noluzayo kwikamva.
Ukubona amaqanda kwindlwane, ukutshabalalisa iklatshi ephupheni.
Amaqanda ahlala evela kwindlwane ngexesha lokulala. Amaqanda ahlala eluphawu lokugqibelela kunye nokuqala kobomi. Nabani na ophupha amaqanda kwindlwane anganqwenela ukuba nenzala, usapho olwakha indlwane. Amaqanda kwindlwane angabonisa nelifa elizayo kwaye abonwa njengophawu lokulala oluqinisekileyo.
Ukuba kukho iingxelo zamaphupha aneendlwana ezilahliweyo okanye iindlwane ezinamaqanda aqhekeziweyo okanye awonakalisiweyo, kunokuvela ukuvuza.
Amava ezinambuzane ezinambuzane ephupheni.
Ingqalelo! I-Hornet okanye iindlwane ze-wasp zidlala indima ebuthongweni.
Iimpondo kunye noonomeva ikakhulu zibonwa njengezinto ezingathandekiyo kunye nezisongelayo. Kwangokunjalo, ukubonakala kwamaqhuqhuva okanye iindlwane zophononongo ephupheni kutolikwa njengomyalezo ongalunganga: uphawu lwephupha lujolise ekucebiseni ngokulumkisa nasekulumkiseni umphuphi.
Xa amabhinqa amancinci ephupha ama-hornet, kufuneka ingqalelo enkulu. Kule meko, i-hornet inokufuzisela ukuba abafazi abanomona basendleleni.
Hum, hum, hum: Ndiphupha inyosi
Iinyosi zinomfanekiso oqinisekileyo, ngokuchaseneyo noonomeva okanye oonomeva. Babonwa njengabasebenzi kunye nasekuchazeni amaphupha, baqondwa njengabathunywa bolonwabo kunye nempumelelo. Ukuba indlwane ezele iinyosi ezixakekileyo ivela ephupheni, oku kudibanisa iipropathi ezilungileyo zezinambuzane kunye nezesidleke. Ke ngoko, icebisa ukuba ukusebenza nzima kunye nokuzincama kule minyaka imbalwa idlulileyo ngoku kukhokelela kwikhaya eligcwele ulonwabo. Ukuba ubona umgcini nyosi kunye nemingcwabo yakhe ephupheni, oku kunokuqondwa njengophawu lomsebenzi ozayo, oya kuthi ubenomdla kumntu ophuphayo.
Phupha malunga nokuphilisa okanye ukutshabalalisa izidleke
Iimbovane ziyaziwa zixakekile kwaye zikhuthele. Ubomi abubonakali bume esihlavini, imbovane nganye yikhreyikhi kumatshini. Iimbovane yindawo yokuzala apho inzala ikhula khona, ikhuselwe luluntu lweembovane. Ukuba indlwane yembovane ibonakala kulowo uphuphayo, oku kufanele ukuba kuqondwe njengesishukumisi sokwenza ngakumbi ishishini kunye nokukhuthala. Ukuba iphupha lizama ukutshabalalisa isidleke xa silele, oku kuyabaluleka kutoliko lwendabuko lwamaphupha njengophawu lwelishwa elizayo.
Ubusuku kubantu abaninzi: indlwane yesigcawu apho kuzalwa khona izigcawu zosana!
Izigcawu ziluncedo kakhulu kwezinambuzane, ukanti ke zezinye zezinambuzane apho abantu banxulumana noloyiko kunye noloyiko kwaye zibonwa phantse njengezingalunganga. Ke ngoko, izigcawu zihlala zibonakala kumaphupha amabi. Iindlwana zesigcawu zinemisonto emininzi ephothiweyo. Zezona ndawo zizalela kuzo izigcawu ezingakumbi kwaye ke ngoko ziyonyusa ukungonwabi. Logama izilwanyana zingekaqanduseli kumaqanda abo ephupheni, lo luphawu lokuba ububi bunokuthintelwa.
Xa iindlwane zeentaka zivela njengophawu lwephupha
Ukuphupha iindlwane zeentaka kunye okanye ngaphandle kwamaqanda
Ngokuqhelekileyo abantu bayazithanda iintaka kwaye bayabamonela xa bekwazi ukubhabha. Ukubhabha kulingana nenkululeko kunye nenkululeko. Indlwane yentaka itolikwa kuhlalutyo lwamaphupha njengophawu lomnqweno wokufumana ukhuseleko ngakumbi, ukhuseleko kunye nokukhuselwa okungakumbi. Ukuba kukho amaqanda kwindawo yokuzalela intaka, oku kunokuba luphawu lwentsikelelo ezayo yabantwana okanye ilifa elizayo.
Esona silwanyana sinekratshi! Qaphela ukhozi kwindlwane ephupheni.
Ukhozi, ukumkani wamazulu, luphawu lwezithixo eziphezulu. Ihlala ivela emaphupheni kwaye imele amandla, amandla, ukucaca kunye nenkululeko. Ukuba ukhozi lubonakala kuwe ngelixa ulele, oko kuthetha ukuba amandla amatsha kunye nemikhosi iyavela. Kuhlalutyo lwamaphupha, indlwane yokhozi ilinganiswe njengophawu oluqinisekileyo: ngamandla ahlaziyiweyo, umphuphi unokuphumeza iprojekthi kwikamva!
Inyoka kunye neendlwane kwihlabathi lamaphupha.
Iphupha lendlwane eneenyoka-indlela eligquba ngayo!
Iinyoka zizilwanyana eziguquguqukayo kwaye zinomdla. Ziyahamba ngokukhawuleza, zibane ngokukhawuleza, kwaye zingumqondiso obalaseleyo ebantwini kangangeenkulungwane. Ukuba iphupha libona iinyoka ezininzi kwindlwane, amaxhala kunye neengxaki zihlala ngokufihlakeleyo. Izigqibo ezinkulu zobomi nazo zisondele el mundo yomlindo. Ukuba kuphela inyoka irhubuluza ngokuphuma kwayo, isilwanyana silumkisa ngemingcipheko engeyomfuneko kubomi bemihla ngemihla. Ukuba kukho iinyoka ezimbini kwindlwane, eli phupha lilumkisa ngabantu abanobutshaba kufutshane nomphuphi.
Inyoka eluhlaza esidlekeni: lithetha ntoni iphupha?
Iinyoka zenyoka ziqondwa njengemvelaphi yobomi obutsha benyoka kwaye, njengendawo yokubalekela, yomeleza uphawu lwembala yenyoka. Inyoka eluhlaza inxulunyaniswa nentlekele kunye namaqhinga. Ukuba umntu uphupha izidleke ngeenyoka eziluhlaza, kufuneka alumke. Ukuphupha akufuneki kube lula kwaye kunike ukuthembela kwakho kubahlobo abalungileyo okanye kumalungu osapho asondeleyo. Umntu unokuzama ukulimaza umphuphi.
Uphawu lwephupha «indlwane» - ukutolikwa ngokubanzi
Indlwane apho ubona amaqanda okanye amantshontsho sele eqanduselwe ephupheni, ngokoluvo ngokubanzi Ukonwaba kosapho okanye inzala yokuqala. Luphawu lokuba umntu ekubhekiswa kuye uzimisele ukugxila ngokupheleleyo ekukhuliseni usapho, ekungekho nto ime endleleni.
Nangona kunjalo, okuchaseneyo kuyasebenza ukuba indlwane, umhadi okanye umngxunya wezilwanyana ephupheni ishiywe kwaye ayinanto. Kule meko, ngokubhekisele kubomi bosapho, Ukuphoxeka, Ubuhlungu neengxabano. Umanyano lwangaphambili phakathi kwamalungu osapho lusengozini, lunokude luphuke ngokupheleleyo. Ephupheni lotata okanye umama, uphawu lwendlwane engenanto ikwabonisa uloyiko lwekamva apho abantwana banokushiya ikhaya labo.
Amaqanda aqhekekileyo okanye aqhekekileyo esidlekeni nawo anika isilumkiso Ukungaphumeleli nakwimicimbi yezorhwebo. Ukuba iphupha limalunga nendlwane yesilwanyana esiyingozi, umzekelo, inyoka, uphawu luyakumema ukuba ubazi ngakumbi ubungozi bobomi bemihla ngemihla kwaye ungathathi umngcipheko ngokungeyomfuneko. Kusenokubakho abantu kwindawo ohlala kuyo abafuna ukonzakalisa loo mntu kuthethwa ngaye.
Uphawu lwephupha «indlwane» - ukutolikwa kwengqondo
Kutoliko lwengqondo ngokwamaphupha, uphawu "indlwane" lunokubhekisa kubomi bosapho. Umntu ekuthethwa ngaye unokunqwenela ukutshata kwaye abe nabantwana. Isidingo sokhuseleko khu seleko kwaye ukhuseleko luza nayo. Oku kuyinyani ngakumbi ukuba wakha indlwane ephupheni lakho.
Ngokwolu toliko, indlwane engenanto inokuba nemvakalelo ye Ukulahlwa kwaye ibonisa isizungu. Ukuba ngulo mntu kuthethwa ngaye oshiya indlwane ephupheni, uku Inkqubo yokungenelela. Ufuna ukuhlala ngokuzimela ngakumbi, uqhekeze zonke iindibano, kwaye uzakhele ishishini. Olu toliko luyasebenza kwakhona ukuba umntu obandakanyekayo ephupheni utshabalalisa indlwane.
Nabani na ophupha ehleli kwindlwane kwaye eziva kamnandi kufuneka akuqonde oku njengesimemo esivela kwi-subconscious yokuba nesibindi. Banokuxhomekeka kakhulu kubantu abathile, kubandakanya nabazali babo. Lifikile ixesha lokuba ufunde ukuzimela.
Indlwane ye-thrush ibonisa iindaba ezimnandi kusapho. Ukuba ubona indlwane yeephaseji ephupheni, ufuna ukhuseleko kunye nothando, "ukufudumala kwendlwane."
Uphawu lwephupha «indlwane» - ukutolika kokomoya
Ngokwengcinga yokomoya, indlwane ephupheni ifanekisela imeko yentsapho lomntu ochaphazelekayo. Oku kukunika ukhuseleko kunye nokukhuseleka.